Radio Tone RT4 4G / LTE WiFi + Yakabata Maikorofoni + Yakawedzera Bhatiri - Network Radiyo
musha / Radios / Network maRadio / Radio Tone RT4 4G / LTE WiFi + Yakabata Maikorofoni + Yakawedzera Bhatiri
Radio Tone RT4 4G / LTE WiFi + Yakabata Maikorofoni + Yakawedzera Bhatiri
Rated 4.67 Kunze kwe5 yakavakirwa 3 kasitoma ratings
(3 kasitoma wongororo)
Iyo Radio-Tone RT4 ndiyo mamiriro-e-iyo-e-Android POC Radio. Iyo RT4 ine simba kwazvo Motorola-dhizaini redhiyo, ine inogara 4600mAh bhatiri.
Chikwata ichi chinosanganisira maikorofoni inobatwa uye bhatiri rekuchengetedza.
Makodhi ekuponi haashande papakeji iyi.
4600 mAh isina bhatiri ($59.00)
Kunze Mutauri Microphone ($59.00)
Nyaya yematehwe ($59.00)
Desktop Chaja & suction mukombe gomo ($59.00)
Radio Tone RT4 4G / LTE WiFi + Yakabata Maikorofoni + Yakawedzera Bhatiri huwandu
Iyi nhepfenyuro redhiyo inoenderana zvizere ne International Radio Network (IRN)
Iyo Radio-Tone RT4 ndiyo mamiriro-e-iyo-e-Android POC Radio. Iyo RT4 ine simba kwazvo Motorola-dhizaini redhiyo, ine inogara 4600mAh bhatiri
Muenzaniso Nha. Radio Tone RT4
Inoratidzira Yakakwira Inonzwisisika GPS kanyanga
Tsigira GPS / BDS
Mahwindo 130 * 56.5 * 34mm
Net Weight 260g (inosanganisira bhatiri)
Sim Kadhi Dual SIM kadhi mbiri yakatarisa (imwe iri micro SIM)
Sevhisi Inopa Yakavhurwa
Shell Zvinhu Zvepurasitiki
ROM 8GB ROM, inotsigira TF kadhi inosvika 32GB
Chinovhara 2.4 padiki QVGA capacitive inobata skrini, 320 * 240px
Nharembozha Port Micro USB
Dhata yekuchinjisa USB / Bluetooth
Nharembozha internet WAP / WiFi
Kamera Kaviri makamera, 2.0MP kumberi kamera, 5.0MP kumashure kamera
Bhuku renhare 500
Meseji SMS / MMS
Input Runyoro / Keypad
GPS Hongu, zvakare tsigira A-GPS / BDS
Bluetooth Hongu, V4.0
G-sensor N / A.
Kushanda nguva Kusvikira maawa makumi maviri
Yakamira nguva Kusvikira kuma96 maawa
Zvimwe Zvimiro Email, Wallpaper, Karenda, Calculator, Clock, Play Store, Tethering & inotakurika hotspot, nezvimwe
Mitauro Chirungu, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, Italiano,
Vietnamese, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Thai, Cambodian, Korean
Chakareruka / Chinyakare Chinese
Zvishongedzo 1 x 4600mAh bhatiri
1 x Mhosva
1 x Mushandisi webhuku
Kubhadharisa doko (sarudzo)
Mhepo inoyerera nharembozha (sarudzo)
MuUS, chete AT&T uye T-Mobile inotsigira ichi chigadzirwa. Kune vamwe vatakuri muUS, unofanirwa kushandisa hotspot yeWiFi
4600 naRaama bhatiri rongedza
3 anodzokorora nokuti Radio Tone RT4 4G / LTE WiFi + Yakabata Maikorofoni + Yakawedzera Bhatiri
kb4t (Zvinosimbiswa muridzi) - April 10, 2019
Iyo RT4 mutambi akasimba. Chikonzero chega chandisingape 5 nyeredzi ndechekuti iyo skrini inonetsa kushandisa.
Mifananidzo uye "kiyi" dzekhibhodi idiki kwazvo zvekuti kuzvibata nematinji ezvigunwe zvinoburitsa mhedzisiro isingatarisirwe uye kushushikana. Vazhinji vakataura pamusoro peichi chikamu chekushanda kweRT4. Makarobhoti emakhibhodi achashanda uye pamwe makonzo ebluetooth anogona asi kana imwe iri mumunda, zvishongedzo zvakadaro zvakaoma uye zvakaomarara kushandisa.
Hupenyu hwebhatiri hwakanyanya. Bhatiri re4200 maH rinotora mazuva maviri azere zviri nyore kunyangwe paine yakawanda yekufambisa. Vazhinji vakarumbidza hupenyu hwebhatiri nechikonzero chakanaka. Sezvo ini ndisingashandise maseru enhare echishandiso zvachose, izvo zvinokonzeresa kune hwakareba hupenyu hwebhatiri. Iyo RT2 inopa yakawanda yekugamuchira odhiyo vhoriyamu uchishandisa yakavakirwa-mukati mutauri kana mutauri mic. Mumotokari yakanyarara zviri nyore kuteerera chero hurukuro. Muvani yangu yebasa ine ruzha, ndinogona kunzwa kutepfenyurwa kwakawanda ndisina kubata mutauri kunzeve yangu. Kutumira odhiyo yakachena uye inonzwika.
Ini handina kushandisa iyo RT4 senharembozha saka handigone kutaura kudivi rekuita kwechikwata. Kuita kweWifi kwakanakisa kunyangwe pamipendero yeiyo wifi yekuwana poindi. Ini ndagutsikana zvizere nekuita kweRT4. Ini ndashandisa iyo RT4 yakagara zvakanaka kumba kwangu kana kushopu pamwe ne mobile. Munzvimbo yega yega, uchishandisa Zello zvakanyanya, iyo RT4 yaita zvakavimbika uye zvine mutsindo. Ini ndinoita setup uye marongero ekugadzirisa pandinenge ndakagara uye ndinogona kunyatso mhanyisa akakodzera mapoinzi pasikirini. Nharembozha mashandiro anoda kutarisirwa uye zvishoma zvekuita kana chiteshi shanduko dzichidikanwa kana zvimwe zvigadziriso.
Iyo pasuru kana bundle inopihwa neNetwork Radios inopa mushandisi zvese zvinodiwa kushandisa iyo RT4 mune ese marongero. Iyo yakaunganidzwa bhatiri rekuwedzera, mutauri / mic, charger uye girazi remhepo rinotendera mushandisi kuenda nhare kana kumira sezvaanodiwa, pazvinenge zvichidikanwa. Ini ndinokurudzira iyo RT4. Frank Haas KB4T, Florida USA
Ben Mathes (Zvinosimbiswa muridzi) - April 4, 2020
Ndichangowana yangu RT4- yakanakisa! Yakatora maminetsi makumi matatu kuti maapps angu awedzerwe- redhiyo inoshanda chaizvo! Duarte akadzikisa mutengo mushure mekunge ndaraira uye ari kuzondichinjira! Akanaka mukomana- anopenga nezve radio iyi! K30BCM
Ndakatenga 1 anenge makore maviri apfuura, iri redhiyo huru.
Sale! $299.00 $249.00 Select mikana
Chokwadi F25 4G LTE / WIFI (Android yakavhurwa)
$299.00 Wedzera ngoro